China Model No: China Manufacture Q91Y Series Hydraul scrap metal heavy shear shear machine factory sy mpamatsy | Mampiray Top
Model No: Masinina manamboatra vy Q91Y Series Hydraulika milina vy mavesatra
Q91Y andian-tsarimihetsika milina fanodinana vy mavesatra, afaka manety bara sy mombamomba azy isan-karazany, metaly vy maro be mifampitohy, ao anaty lavaka lava iray, fantsom-by vy maivana fonosina ao anaty sakana iray, fiara maloto natsofoka tao anaty bolongana fanontana fiara . Ho fanampin'ny fiasa manety.
MODELY Q91Y Series
Lava volo 1600-2000mm
hetsika Fanaraha-maso mandeha ho azy
Ny milina fanodinam-bolam-boaloboka Q91Y izay be mpampiasa dia ampiasaina amin'ny karazana vy fako mafy, fako mavesatra, vy malefaka ary manify, akorandriaka fiara, vy vita amin'ny vy metaly maivana, profil, famokarana ary vy vy. ny karazana plastika vy tsy vy rehetra (vy tsy misy fangarony, firaka aliminioma, varahina, sns.) famonosana famatrarana sy fanetezana hihaona amin'ny masontsivana azo ampiharina amin'ny fiampangana azy, ny Q91Y andiam-pahefana mavesatra vita amin'ny vy vita amin'ny vy dia fitaovana tsara ho an'ny fikosoham-bary, indostrialy fanalefahana vy tsy mpiorina, indostria fananganana vy ary mpamokatra akora.
Ny milina fanodinam-bolo mavesatra Q91Y koa dia manana ny fantsom-panafody, izay afaka mamoaka vy kely tsy ara-dalàna maromaro ao anaty boaty fanangonam-bokatra, aorian'ny fitrandrahana sy fanetezana ny vy tapaka, ny harafesina ary ny akora hafa manimba dia mety ho nopetahana ampahany, nanatsara ny fahadiovan'ny vy vy. Azo ampiasaina hanety ny fako mavesatra amin'ny habe samihafa. Q91Y andian-tsarimihetsika milina fanenjana vy mavesatra dia afaka manolo tanteraka ny fanapahana ny lelafo. Milamina sy mahomby ny famahanana amin'ny masinina manaikitra vy na kamio forklift.
● Q91Y andian-dahatsoratra hydraulic Heavy duty scrap shear metal machine dia mandray ny vy vy mitambatra rafitra welding, ny masinina dia manana henjana avo, ny welding faritra amin'ny alàlan'ny fitsaboana amin'ny fahanterana artifisialy fahanterana, manafoana ny adin-tsaina, tsara tsara ny milina, milamina.
● Ny lava vita amin'ny vy fanapahana vy dia manana fiainana lava sy maharitra.
● Ny fanadiovana ny antsy dia azo ovaina, izay manatsara ny fahamendrehan'ny fitaovan'ny milina sy ny ain'ny serivisy.
● Ny vatan'ny boaty lehibe dia vita amin'ny vy vita amin'ny vy, ary ny rindrina anaty boaty dia vita amin'ny takelaka vy NM500 miaraka amin'ny fanoherana mitafy avo indrindra, izay manonona ny fanoheran'ny mason'ny boaty fitaovana. Ny fihetsiky ny lohan'ny fanosehana ny boaty fitaovana dia entin'ny rafitra hydraulic tsy miankina, amin'ny alàlan'ny motera hydraulic sy ny rojo. Ny haben'ny fitaovana manosika dia fehezina mandeha ho azy, ary manana ny toetran'ny fiarovana avo lenta sy azo antoka ny fanoherana ny be loatra.
● Rafitra hydraulic miaraka amin'ny zon'ny fananana ara-tsaina tsy miankina sy ny famolavolana tsy miankina. Ny varingarin'i shear lehibe dia mandray ny faritra misy azy mba hanomezana fahafaham-po ny fiasan'ny rafitra angovo kinetika. Ny rafitra hydraulic manontolo dia matevina ary ny fandaminana fantsona dia mitombina, izay mampihena ny fampiasana ny fantsom-pifandraisana sy ny kiho, ka mampihena ny fiakaran'ny hafanan'ny rafitra hydraulic ary miantoka amin'ny fomba mahomby ny fiasan'ny rafitra hydraulic sy azo antoka.
● Ny volavolan-tsolika solika, habetsahan'ny antonony, hamafin'ny firafitra avo lenta, seranan-tsambo miverina amin'ny solika ary seranan-tsentsin'ny solika dia nosarahana fizara iray, mampihena ny hafanan'ny solika hydraulic.
●Q91Y andian-tsarimihetsika milina fanenjana vy mavesatra dia mampiasa ny famatrarana ambony sy ny famatrarana ny andaniny roa amin'ny sisin-tsakafo tsy mitahiry sy misaraka, ny famolavolana ny boaty fitaovana malalaka, noho izany ny fampiharana ny akora simika dia tsara, matevina avo lenta aorian'ny fitetezana.
● Ny faritra fisokafan'ny boaty ara-materialy dia lehibe, mety amin'ny fitaovan'ny milina, fako mavesatra mavesatra, potika vy sy manify, akorany fiara, firafitra vy mahery tsy ara-dalàna, fantsom-by, takelaka vy, vy vy, I vy, vy vy ary fanetezana profil hafa, mora ao anaty boaty ara-materialy, manandratra tanteraka ny tahan'ny fampiasana ireo fitaovana.
● PLC fanaraha-maso mandeha ho azy fanaraha-maso tontonana fanaraha-maso tontonana fanaraha-maso mandeha ho azy, ary ny zoro multi-zoro rafitra fanaraha-maso, mora ho an'ny mpampiasa ny mifehy sy ny fizotran'ny fizotran'ny fampiasana fitaovana. Fandidiana azo antoka sy azo itokisana, fitaovana fanaraha-maso tsy misy tariby tsy misy tariby, fitaovana famokarana tsipika famokarana mpandraharaha tokanana.
● Q91Y andian-tsarimihetsika milina fanenjana vy mavesatra ampiasaina amin'ny fifehezana valizy lojika lehibe azo antoka, filtration mahaleo tena sy ny rafitra fampangatsiahana, afaka miantoka ny fiasa mahomby sy milamina. Ny fampiharana feno ny fiovaovan'ny herinaratra tsy miova sy ny haitao haingam-pandeha dia afaka mitahiry manodidina ny 30% raha manome toky ny vokatra, ary ny fanjifana angovo isaky ny taonina fanodinana vy dia ambany noho ny fenitra takiana amin'ny indostria.
Halavan'ny lelany (mm)
Faharetan'ny fanetezana （fotoana / min）
Ny andiam-pandrefesana Q91Y mavesatra anay dia manome ny masinina marika malaza, niara-niasa tamin'ny mpamatsy marika malaza eran-tany izahay, toa an'i SIEMENS, NOK OMRON, SCHNEIDER, CHINT, MITSUBISHI sns. Nandritra ny 10 taona mahery.
Ny maodely faran'izay kely Q91Y milina fanenjana vy mavesatra vy dia azo arovana tsara ao anaty kaontenera 40 HQ. Raha sambo amin'ny sambo, dia hosaronantsika ny tokotanin'ny poncho sy Load hiarovana ny milina fanetezana vy mavesatra adidy Q91Y.
Zahao Q91Y andian-dahatsoratra Hydra mavesatra vy manety vy fanapahana milina ho an'ny fanapahana vy amin'ny hetsika!
Teo aloha: Model No: Masinina fanamboarana sinoa fanaraha-maso Q43 Series Hydraul Scrap Metal Alligator Shear Machine
Manaraka: Model No: Sinoa fanamboarana sinoa fanaraha-maso Y83 Series Hydraulika Metal Chip Briquetting Press Machine ho an'ny Metal Recycling
Machine Allarator Shear
Milina fanodinana volo vita amin'ny alikaola
Sheet Metal Baler, Masinina vita amin'ny vy vovoka, Masinina vita amin'ny paosin-tsolika Baler Aluminium mitsivalana, Alligator Shear ho an'ny Mobile Digger, Hydraulika Baler / Aluminium afaka milina milina, Copper Scrap Baler,